Ezinye zeemfuno zokwenza isitofu sokubumba esisemgangathweni-iBhlog-NINGBO MINGYU MOLD MANUFACTURE CO., LTD
Isisombululo sesitshixo sokujika
Umatshini wokufaka inaliti
Imveliso yevolumu ephantsi
Iprojekthi yeCase Show
One-stop Umboneleli weNkonzo yokuBumba isitofu sePlastiki
Ixesha: 2021-04-14 hits: 306
Ukwenzela ukuphucula umgangatho wokubumba weplastikhi, ukunciphisa izikhalazo zomgangatho wokungunda, kunye nokuhlangabezana neemfuno zabathengi xa sivelisa ukungunda, sishwankathela kwaye sishwankathela iingxaki eziqhelekileyo kwimveliso yokubumba, ukumisela imigangatho, nokumilisela njengoko kufuneka.
Ngokwamava ethu emveliso, sishwankathela imveliso yokubumba okuqhelekileyo kula manqaku angama-30 alandelayo:
1. Kwizinto ezingenanto zokubumba ezincinci kune-2020, umngxuma wokuhlola uyafuneka phakathi kweepleyiti zika-a kunye no-b kwizikhewu zokubumba ezingaphezulu kwe-2020, zonke iitemplate kubandakanya iipleyiti zethimble kufuneka zibe yimingxunya yokuhombisa;
2. Imijelo yokukhupha amanzi kufuneka yenziwe ngomatshini kwisithuba sesikhokelo kunye nomkhono wesikhombisi esingenanto sokubumba ukukhusela iposti yesikhokelo kunye nomkhono wesikhombisi ekuxineni;
3. Akufanele kubekho iimbombo ezibukhali kwi-mold, kwaye i-chamfering iyadingeka. Ngaphandle kweendawo ezichaziweyo ngokukodwa;
4. Izinto zokubumba zangaphakathi nezokungunda akufuneki zidityaniswe ngaphandle kwemvume;
5. Indawo yokukhupha amanzi kufuneka ivulwe kwindawo efanelekileyo kumda wemveliso yokubumba. Ukubalula kwemijelo yokukhupha, nceda ujonge kwincwadana yoyilo lokungunda;
6. Gwema ukusebenzisa i-grinder ukucoca isikhunta ngangokunokwenzeka. Ukuba kufuneka usebenzise into yokusila ukwenza, kufuneka usebenzise ilitye leoyile ukugcina ukukhanya (ngakumbi indawo yokuzahlula);
7. Unyango lomphezulu womngundo wangaphakathi kufuneka lwenziwe ngokungqinelana netafile ye-bom okanye ezinye iimfuno zobuchwephesha ezazisiweyo. Imigca yokulungisa kumphezulu ongadibanisiyo (ukusika ngocingo, umatshini wokugaya, umatshini we-cnc gong, umatshini wentsimbi) kufuneka usebenzise ilitye leoyile ukugcina ukukhanya;
8. Zonke izinto zokubumba zangaphakathi kunye neemfuno zebumba ezingenanto kufuneka zithengwe ngokomyalelo okanye ngokweemfuno zobugcisa eziqinisekiswe ngokusesikweni ngexesha lokuphononongwa koyilo. Isatifikethi sezinto kufuneka sinikezelwe, ukuba sisikhunta esinzima, kufuneka kunikwe ingxelo yonyango lobushushu. Zonke izatifikethi ezifanelekileyo
9. Zonke izinto zokubumba ezingaphambili nezingasemva, ukufakwa, imiqolo emi phezulu, ukuthambeka okuphezulu, umphezulu othe nkqo (ibhloko yokutyhala), umhlakulo wedreyini, njl. Njl. Zonke izinto zokubumba kufuneka zilungiswe ngomngxuma wesetyhula emzantsi okanye kwicala, kunye igama lezinto kunye nokuqina kubhalwe;
10. Izinto ezibalulekileyo ezinxitywayo ezinjengokuma kwemiqolo, ibhlokhi yokutyhala, isinqumleli somhlakulo, nomlomo kufuneka uzinitered kwaye uqiniswe;
11. Indawo emi kumqolo kufuneka ibekwe kakuhle. Iindlela zokubeka zibandakanya islingling, ubuhlalu bamaza, i-hasco (dme) indawo yokubopha indawo esemgangathweni, njl.njl., Ngokweemfuno zeprojekthi nganye. Indawo emi kuyo kufuneka icwecwe kunye neepleyiti ezinganyangekiyo. Amaso kunye neepleyiti zokunxiba kufuneka zenziwe ngezinto ezinganyangekiyo, kwaye kufuneka kongezwe imijelo yeoyile;
12. Ikholam yesikhokelo se-oblique mayicinezelwe ngokuqinileyo kwaye ayinakujikeleziswa okanye ikhululwe. Umsila wekholam yesikhokelo esityebileyo kufuneka uqhubekeke ubume bekhowuni okanye obusikiweyo, obuluncedo ekuqinisekiseni ukuhamba okuqhelekileyo kwendawo yomqolo. Ukuba zimbini okanye nangaphezulu izithuba zesikhokelo ze-oblique kumqolo omnye, ubude, ubungakanani kunye nokuthambeka kwezithuba zesikhokelo se-oblique kufuneka zilingane;
13. Izihlalo ezithambekileyo kufuneka zisebenzise izinto ezinzima zokunxiba. Uphahla oluthambekileyo malusetyenzwe ngemijelo yeoyile. Isihlalo sophahla esityebileyo ngokubanzi siqiniswe kwi-hrc40-45 degrees nge-2510 okanye i-cr12. Ngenxa yokuba isitulo sophahla esityebileyo sixhomekeke kumthwalo wempembelelo, akufuneki sibenzima kakhulu okanye siza kuqhekeka, kwaye sinyuse i-engile c kwii-engile ezilungileyo zonke. . Ifuna incam yesikhokelo esiphakamileyo (ubhedu). Akukho welding
14. Imbaleki kunye nendawo yokutyisa iglu kufuneka zonge ukukhanya # 400-600;
15. I-thimble, isilinda, i-thimble, umphezulu othambekileyo kunye nebhodi ye-thimble kufuneka zibhalwe iikhowudi zokuchonga ezihambelanayo ukuze zifakwe ngokulula. Ukuba indawo ye-thimble kwimveliso ayimi ethe tyaba, isiphatho se-thimble kufuneka senziwe imilo engu "d" okanye sibekwe ngesitshixo sepini yokuchasana nokujikeleza;
16. I-thimble yamkela imigangatho ye-hasco okanye ye-dme, leyo umntu anokuyikhetha ixhomekeke kwiimfuno zobugcisa kwitafile ye-bom okanye ezinye izinto ezibunjiweyo ezisemthethweni;
17.Ukuqhubekeka kwefaskoti ephethe amanzi (isangqa esimilise okwe "o"), kukho isithuba esikwi-0.25mm kwicala elinye. Ngokubanzi, ifaskoti kufuneka ilayishwe kwangaphambili nge-0.5 ~ 0.8mm. Ukuba le ngongoma ayiqwalaselwanga, ifaskoti kulula ukuba yonakale ngoxinzelelo lweDrop, obangela ukuvuza kwamanzi;
18. Uku-nitrate umlomo, kufuneka wenze anti-revolution. Irediyasi yomlomo kufuneka ihlangabezane neemfuno zomzobo. Umlomo awunazitridi, kwaye kusenokwenzeka ukuba wawudumbile ngaphambi kokuhambisa ukungunda;
19. Ubumbeko lwesakhiwo esiqhelekileyo kufuneka luxhotyiswe ngeentloko zenkxaso, zombini iziphelo kufuneka zibekwe zathi tyaba, isikhunta esincinci silayishwe nge-0.1mm, kwaye ukungunda okukhulu kulayishwe ngaphambili yi-0.1mm-0.15mm;
20. Isangqa somsesane wokubekwa kufuneka sihambelane nomzobo, kwaye imo kunye nokuma kwendibaniselwano ngentonga ephezulu kufuneka kungqinelane nomzobo;
21. Ngokucaciswa kwetephu, nceda ujonge kwitafile bom okanye imodeli eqinisekisiweyo. I-counterbore ye-faucet kufuneka yenziwe kwaye ifakwe ngokungqinelana nemodeli. Imingxunya yokugrumba akufuneki icoshwe, iikona ezibukhali kufuneka zigqunywe;
22. Uthutho lwamanzi kufuneka luphawulwe ngo -1, ngaphandle1, ngo-2, nangaphandle2 ………;
23. Bonke oonobumba abaphawulwe kwisikhunta kufuneka bacoceke, baqiniseke kwaye bangabi gwenxa;
24. Ukubumba kufuneka kufakelwe izitshixo ezisecaleni (iitshixo ezithe nkqo) kuwo omane amacala. Ukuba awukwazi ukufaka isitshixo esecaleni, kuya kufuneka ufake isitshixo okanye i-taper lock. I-taper lock kufuneka ifakwe ngokuthe tye;
25. Zonke izikrufu kunye nezinto zokubumba kufuneka zibe ngamalungu asemgangathweni, kwaye iintloko ze-screw azinakusikwa. Ubude bokutshixa obusebenzayo kufuneka banele, ngesiqhelo i-1.5 okanye i-2;
26. Isitshixo somlilo esitshisayo kufuneka sijikelezwe ukuthintela ukukrwela iingcingo;
27. Faka ikhadi lesazisi semilomo eshushu kwicala lenjongo yokubumba;
28. Ukunikezelwa komngundo kunye nokwamkelwa: kubalulekile ukusebenzisana nenjineli yokubumba ukuze kudluliswe ukwamkelwa ngokwe "luhlu lokutshekisha ukungunda" ngaphambi kokuba kwenziwe ukupakisha kunye nokubumba;
29. Amanzi kufuneka avavanywe phambi kokuba kuhanjiswe ukungunda. Emva kokuba uxinzelelo lwamanzi (ngaphezulu kwe-100pa) luhlolwe kwaye lwamkelwa, amanzi kufuneka avuthelwe acoceke ngompu womoya;
30. Ngexesha lenkqubo yokwenza, umphezulu wangaphandle wesiseko sokubumba kufuneka ugcinwe ukuthintela umhlwa kunye nokukrwela. Phambi kokuba uhambise ukungunda kunye nokupakisha, ukungunda ngaphakathi kufuneka kutshizwe nge-rust inhibitor emhlophe / engenambala. Zonke iindawo zomngundo kufuneka zicoceke emva koko zithanjiswe.
Previous: Umgaqo kunye nokwakheka komngundo ekubumbeni ngenaliti
Okulandelayo: Inaliti ngumngundo imbaleki iteknoloji